मधेस राजनीतिमा सोन चिरैया
मधेसको सुनजस्तो खारिने सङ्घर्षको समृद्ध परम्परा र विरासतको प्रतीक हो– ‘सोन’ । र चरामात्र होइन, संरक्षणको प्रवृत्ति हो– ‘चिरैया’, जो सन्तानका लागि पनि चाहिन्छ । मधेसमा विद्यमान आन्दोलनकारी ऊर्जा— जो राज्य र समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रकट हुने परम्परा छ— त्यो अहिले कतिको सुरक्षित अस्तित्वमा छ ?
संस्कृतिनिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ राममनोहर लोहिया आफ्नो देशको दक्षिणी भूगोलको यात्रामा थिए । नदी, पहाड र जंगललाई असाध्य माया गर्ने उनी त्यस क्षेत्रको कुनै नदीमा नुहाउने तरखर गर्दैगर्दा माझीले सोधे, ‘तपाईं कुन नदी किनारको ?’ लोहिया एक छिन सोचमग्न भएपछि बोले, ‘म त सरयूपुत्र हुँ ।’ माझीले फेरि सोधे, ‘त्यसो भए तपाईं राजा रामचन्द्रको गाउँको ?’
हामीकहाँ भोक र कुपोषणबाट सरकारी तप्काले कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने बुझ्न खेतीप्रति सरकारी रवैया र अन्न आयातको बढ्दो अनुपातको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । बहुतहमा निर्वाचित सरकार आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यतापट्टि सुधारको पाइला चालिएको छैन । बरु भुइँतहमा दुई थरीको मनोवैज्ञानिक दबाब छ ।
मुस्लिममाथि किन शंका ?
अन्तरजातीय र अन्तरसामुदायिक अन्तरक्रिया विस्तृत र सघन हुँदै छ । त्यसैले मुस्लिम समुदायको मुख्य पर्व इदका अवसर पारेर ‘इद मुबारक’ दिने चलन बढ्यो । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा रोजाको अवधिमा एकअर्का समुदायमाझ ‘इफ्तार’ भोज दिन थालियो र त्यसमा सहभागिताको क्रम बढ्यो ।